Wararka Maanta: Isniin, Sept 16, 2013-Ra’iisul wasaarihii hore ee Somalia oo sheegay in uu ku tegi doono Puntland booqasho si uu Shacabka Puntland ula kulmo
Isniin, September 16, 2013 (HOL) — Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Prof. Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) oo horay ugu dhawaaqay inuu yahay murashax u tartamaya xilka madaxweynimo ee maamulka Puntland ayaa sheegay inuu dhowaan tegi doono Puntland si uu ugu ololeeyo doorashada dhacaysa bisha Jannaayo 2014-ka.
Mudane Gaas wuxuu sheegay inuu ololihiisa ka sameyn doono laga soo billaabo Boosaaso illaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, uuna dadka la hadli doono si uu fikradahooda usoo ogaado sidoo kalena aan u xog wareysto dadka Puntland ku nool.
"Puntland ayaan dhawaan tegi doonaa, waxaana doonayaa inaan soo maro guud ahaan gobollada Puntland ay ka kooban tahay, qorshahayguna waa in aan dadka fikirkooda ogaado,” ayuu yiri Prof. Gaas.
Sidoo kale, ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay in marka uu socdaalkiisa soo gabagabeeyo uu billaabi doono ololihiisa doorashada, islamarkaana qorshihiisu yahay inuu helo codka dadka Puntland si uu ugu hoggaamiyo dimuqraadiyad iyo barwaaqo waarta.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa wuxuu dhowr jeer booqashooyin ku tagay Puntland intii uu hayey xilka ra’iisul wasaarenimo ee dowladdii KMG ahayda, sidoo kale wuxuu booqday Puntland markii uu xilkaas ka tagay, iyadoo uu muran soo dhexgalay isaga iyo madaxweynaha Puntland, Faroole oo ka mid ah murashaxiinta u taagan xilka madaxnimo ee Puntland.
Maamulka Puntland oo ka mid ah maamullada ka jira Soomaaliya ayaa lagu wadaa in bisha Jannaayo ee sannadka 2014-ka ay ka dhacdo doorashada madaxweynimo ee maamulkaas, iyadoo ay u taagan yihiin xilligan siyaasiyiin kala duwan oo dhamaantood kasoo horjeeda madaxweynaha xilka haya.
Puntland ayaa waxaa tan iyo markii muddo hal sano ah lagu kordhiyay xilka maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole ka dhacay rabshado ay dadka qaarkood uga soo horjeesteen muddo kororsigaas.
Diyaargarow doorasho oo xooggan ayaa ka socda Puntland, iyadoo doorashadan ay ka mid noqon doonto doorashooyinkii ugu adkaa ee soo mara maamulkaas tan iyo markii la dhisay sannadkii 1998-kii.
9/16/2013 2:31 AM EST
Isniin, September 16, 2013 (HOL) — Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirka Brussels ee maanta furmaya ka muujiyay rajo weyn, isagoo sheegay inuu yahay shirk a duwan kuwii Soomaaliya horay loogu qaban jiray.